Plate Engagqwali, Gqoka Resistant Steel Plate, Big Flower Embizeni - Hongyi
I-Shandong Hongyi New Material Co, Ltd ingumkhiqizo wokukhiqiza wepayipi ongenamthungo, ukuthengisa, ukuthengiswa kwempahla, ukuhwebelana kwamanye amazwe njengenye yamabhizinisi ahlanganisiwe. Inkampani ingenza ngezifiso izinto ezahlukahlukene nokucaciswa kwephayiphu yensimbi engenamthungo kanye nebhizinisi lokucubungula elijulile. Imile isitokwe kwanele, inkampani has engaphezu kwengu-20 yasekhaya eziphambili shandong Seamless steel ukukhiqizwa ipayipi umugqa, inqubo ukukhiqizwa isihambile, amandla ezobuchwepheshe unamandla, izindlela ukuthola ziphelele, izinga umkhiqizo muhle, ujabulela idumela elihle futhi ukuthandwa embonini.
Kukanxande tube iphakethe unxande steel tubi ...
Xhumana nathi ukuthola eminye imikhiqizo
Imikhiqizo yethu ihambisana nohlelo lwe-ISO9001 ne-API, Ukusekela ukuhlolwa komuntu wesithathu.
Ukuthengisa kwethu kungathumela ikhotheshini yakamuva ngasikhathi sinye uma udinga futhi sikunikeze isaphulelo esithe xaxa ngokuya kwenani elikhulu.
Insizakalo yamahora angama-24 nokusekelwa kobuchwepheshe kobuchwepheshe
Imikhiqizo yenkampani yile: imikhiqizo: ipayipi eligoqiwe elishisayo lekhabhoni lensimbi, ipayipi lensimbi elixutshiwe (ipayipi le-boiler), ipayipi lokunemba, ipayipi lesikwele / elingunxande, ipuleti lensimbi yokugqoka, insimbi engagqwali, ipuleti lensimbi le-alloy, imbiza yembali ye-corten nensimbi ye-corten isibuko ...
Ngawo-1960 ngenxa yokwakhiwa kwesigayo esisha esinezintathu eziphakeme (esaziwa njengeTransval mill), lezi zindlela zithuthuke ngokushesha.Umshini omusha ubonakala ngokuzungeza ngokushesha itheku kuya ngemuva indawo yokujika iza ukuguqula i-Angle egingqikayo, ngaleyo ndlela ivimbela umsila kusuka ku-formi ...
Seamless pipe ngezigaba
1. Ukwahlukaniswa ngendlela yokukhiqiza (1) Ipayipi elingenamthungo - ipayipi eligoqiwe elishisayo, ipayipi elibunjiwe elibandayo, ipayipi elibandayo elibandayo, ipayipi le-extrusion, i-pipe jacking (2) ipayipi elishiselwe (a) Ngokwenqubo - ipayipi lokushisela i-arc, ipayipi lokushisela ukumelana ( imvamisa ephezulu, imvamisa ephansi), ipayipi lokushisela igesi, i-furna ...
Ipayipi lesikwele elingenalutho luhlobo lwensimbi ende enesigaba esingenalutho futhi akukho amalunga azungezile.Steel pipe enesigaba esingenalutho isetshenziselwa kakhulu ukuhambisa uketshezi, njengokuhambisa uwoyela, igesi yemvelo, igesi, amanzi nezinye izinto eziqinile. nenye insimbi eqinile, ishubhu lensimbi uhlobo ...